Akkamiin gumaachuu - MediaWiki
Bilisummaa softiweeri fi hawaasa opin soorsii ni jaalattaa? Sooftiweeri MediaWiki, wikipedia, ykn Marsariiti wikimedia kanneen biro ni jaalattaa?
Duuba, dandeettii kee gumaachi kannen gumaachan biroo irraas bari. Fuulli kun gudunfaa bakkeewwani sii dhiyeessuun akka jalqabdu si gargaara.
Qabiyyeen Piroojeektii Wikimedia ragaa bilisaa jalatti maxxanfaman. Koodii barreessi, maki ykn guddisi waliqabama beekkumsa bilisaa kana. API MediaWiki wikis fi qabiyyee API fi Wikidata kannen biroo irratti argaman fayyadamuu jalqabuuf titooriyala hordofi. opin data soorsi kannen biroo XML and SQL dumps dabalate ni jira.
Odeefannoo daran gargaaraan
Yoo Mediawiki amma dura hin fayyadamne:
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=How_to_contribute/om&oldid=4791841"